Misoro yeNhau, 11 Chikunguru 2019
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti zvinhu munyaya dzezvehupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha dzaNyadenga.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chikunguru 11, 2019
Mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC, VaJob Sikhala, vovharirwa mutirongo kwemasvondo maviri zvichitevera kunyimwa kwavaitwa nemutongi wedare remajisitireti wekuBikita, mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikunguru 10, 2019
Vatsigiri veMDC voratidzira padare ramejasitireti muHarare vachiratidza kutsamwa nekunonoka kuiswa kudare iri kwemumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC, VaJob Sikhala.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Chikunguru 09, 2019
Mumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC, VaJob Sikhala, vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wakaitwa kuBikita kuMasvingo mukupera kwesvondo.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chikunguru 08, 2019
Gurukota rinoona nezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vanoti vachawedzera vashandi vehurumende mari pamberi pemusangano wavo nevashandi ava mangwana.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Chikunguru 05, 2019
Meya weBulawayo, VaSolomon Mguni, vanobuda mumusangano wavaita negurukota remhando dzemoto, VaFortune Chasi, zvichitevera kupesana kwavo pahurongwa hwehurumende hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zveZesa zviri muguta reBulawayo.